प्रचण्ड : प्रपञ्च या प्रयत्न | paniphoto
प्रचण्ड : प्रपञ्च या प्रयत्न
paniphoto	July 27, 2012	Post navigation
प्रचण्डलाई नचिन्ने सायदै कोही होलान् । उनको परिचय हेर्दा जति आम देखिन्छ, वास्तविकता त्यस्तो छैन । यथार्थमा प्रचण्ड असाध्यै जटिल र कुटिल मनोविज्ञान भएका नेता हुन् । उनको मनोवैज्ञानिक जटिलता र कुटिलताको असरबाट कोही अछुतो रहन सकेको छैन, स्वयम् प्रचण्ड आफै पनि ! त्यसैले त उनी कहिले बाघझैँ गर्जन्छन्, कहिले भिजेको मुसाको दूर्दशा भोग्छन् । भर्खरै प्रचण्डले दुईटा घोषणा गरे । एक, विलासी जीवन छाड्ने रे ! अर्को, समायोजन प्रक्रियामा रहेका लडाकुलाई फिर्ता बोलाउने रे ! दुवै घोषणा उनको जटिल र कुटिल मनोविज्ञानका नतिजा हुन् ।
धेरै समयपछि यसपटक प्रचण्ड फेरि क्रान्तिकारी अवतारमा देखा परेका छन् । छेपारोलेझैँ रुप बदल्न माहिर छन् प्रचण्ड । जब उनलाई बैद्यले छाडेर गए । जब उनी पुत्र कर्तुतबाट बदनाम भए । जब उनले आँखा अगाडि आफ्नै पार्टीका ‘वफादार’ कार्यकर्ताको भीडन्त देख्नुप¥यो । तब निश्चय उनी हदैसम्म भावुक भए होलान् । उनको भावुकता नाककै टुप्पामा छ । र, भावुकतामा उनले घोषणा गरे, लाजिम्पाटको महल छाड्ने र डेढ करोडको गाडी त्याग्ने । आफूसँग भएको सम्पत्ति पार्टीलाई दिने घोषणा पनि गरेछन् प्रचण्डले । तर उनीसँग व्यक्तिगत सम्पत्ति कहाँबाट आयो ? जबकि उनीलगायत सबै माओवादी नेताले आफ्नो सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाएको प्रचार हुँदै आएको थियो । कुनै नेताको सफलता देश र जनताका लागि उसले दिएको योगदानमा निर्भर रहन्छ । यो आधारमा प्रचण्डको मूल्याङ्कन गर्दा उनी असफल नेताको सूचीमा पर्छन् । प्रचण्डले जनतालाई केही दिएका छन् भने केवल सपना दिएका छन् । उनले देशलाई केही दिएका छन् भने उथलपुथल दिएका छन् । सपना र उथलपुथलको मूल्य तब हुन्छ, जब दुवैको व्यवस्थापन सम्भव हुन्छ । यहाँ न जनताका सपना पूरा भएका छन्, न डेढ दसक लामो उथलपुथल (माओवादी युद्ध र सङक्रमणकाल) को अपेक्षित विसर्जन नै भएको छ । भन्ने हो भने, हाम्रो यात्रा समयभन्दा उल्टो भएको छ ।
यो कुरामा शङ्का छैन, माओवादीका कारण देशमा गणतन्त्र आएको हो । जसको नेतृत्वपंक्तिमा प्रचण्ड नै थिए । कुनै शासन निर्विकल्प र सर्वगुण युक्त नहुने भए तापनि गणतन्त्रभन्दा जनताको नजिकको शासनव्यवस्था अरु छैन । गणतन्त्रमा वंशले शासन गर्दैन । जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा पुग्छन् । तर तन्त्र मात्रै आफैमा केही होईन । जबसम्म संस्कृति र संस्कार उन्नत हुँदैन, तबसम्म जुनसुकै शासन पनि असफल हुन्छ । विश्वमा आज जे जति मुलुकले प्रगति गरेका छन्, त्यो कुनै शासनविशेषले नभई संस्कारविशेषको अवलम्बनबाट सम्भव भएको हो । अब प्रचण्डका अगाडि दुईवटा विकल्प छन् । एक, फेरि पनि दोधारे र फुस्रो क्रान्तिकारी नीति अपनाएर पतन हुने । अर्को, दलीय सहमति कायम गर्ने दिशामा अग्रसर भई सहमतीय सरकार गठन गराएर दलीय सहमतिमा जारी अन्योलको अन्त्य गर्ने । बदनामै भएपनि, दुई जिब्रे भएपनि प्रचण्ड नै छन् नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा । यदि प्रचण्ड (अन्य दलका मूल नेतासहित) को पहल र लचकतामा मुलुक नयाँ निर्वाचनको बाटोबाट अगाडि बढ्न सक्छ भने अझैँ पनि लथालिङ्ग अवस्था सुध्रिने आस गर्न सकिन्छ । अन्यथा हाम्रो प्यारो मुलुकको अस्तित्व खिइँदै जाने निश्चित छ ।
प्रचण्डः तिम्रा अघि दुई बाटा छन् । कुटिल प्रपञ्च या इमान्दार प्रहल । दुवैको गन्तव्य पनि तय छ । प्रपञ्च पुग्छ, पतनतिर । प्रयत्न पुग्छ, प्राप्तितिर । ‘विनाशकाले विपरित बुद्धि’को नियति भोग्ने या ढिलै भएपनि विगतप्रति आत्मालोचना गर्दै असल थालनीको आँट गर्ने; फैसला तिम्रो हातमा । तिम्रो फैसलामा देशको भविष्य निर्भर छ ।
(फेसबुकमा : http://www.facebook.com/yuba21harihar)
This entry was posted in पाहुनाको पालो and tagged प्रचण्ड, प्रपञ्च, प्रयत्न, या. Bookmark the permalink.	3 thoughts on “प्रचण्ड : प्रपञ्च या प्रयत्न”	जुनिता सुब्बा , अमेरिका says:	July 27, 2012 at 11:06 pm	प्रचण्डको कति ठुलो भाउ छ / मलाई अचम्म लाग्छ, मानिसहरु प्रचण्डको पक्षमा र विपक्षमा कुरा गरेर थाक्दैनन्/ गाली गर्नेहरु गाली गरेको गरै/ तारिफ गर्नेहरु उनलाई देवता बनाउँन लागेका लागै छन्/ तर प्रचण्ड राजनीतिका माहिर खेलाडी हुन् भन्ने कुरामा चै कसैको पनि दुइमत नहोला/
अब फरक हेर्ने आँखाको हो /उनले गरेका कामलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमले जति पनि तर्क गर्न सकिन्छ/ यसैले एउटा प्रचण्डका बारेमा मात्रै केन्द्रित हुन भन्दा सम्पुर्ण राजनीतिमा केन्द्रित हुन राम्रो होला/ तर जे भने पनि प्रचण्ड नेपाली राजनीतिको केन्द्रिय भुमिकामा भने छन् है/
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Reply	Rishi Pathak Gauriprem says:	July 27, 2012 at 11:37 pm	Prakash Bhai Tapai le Thulo Galti garnu Bho Ek Choti Pharkera aaunus Srijana Tapai Ko Parkhai ma chhin Aru ko laagi nabhaye Prasiddha ra Buwa ko Izzat ko laagi Bhaye pani Pharki aaunus…..Zindagi Na milega |Duwara….
हो हामी हिँड्यौं : प्रकाश दाहाल
काठमाडौं, श्रावण १२ – म मिडियामा मेरोबारे आएका टीकाटिप्पणी हेरिरहेको छु । सायद कसैको व्यक्तिगत जीवनमा यति धेरै टीकाटिप्पणी हुनु त्यति राम्रो होइन जस्तो लाग्छ । हो, मान्छेको जीवनमा उतारचढाव आउँछ कति मिल्छ कति मिल्दैन । तर त्यसबारे यति धेरै चर्चा हुनु त्यति जायज हो जस्तो लागेन ।
तैपनि देशको ठूलो नेताका परिवारको सदस्य हुनुको नाताले चर्चा हुनु स्वाभाविक पनि हो । आज जुन हिसाबले प्रचार गरिएको छ, खत भयो बिग्रियो, पैसा लिएर प्रचण्डको प्लानमा नै भगाइयो । यस्तो काल्पनिक समाचार देख्दा दुःख र दया लागेर आउँछ, न म सम्पर्कविहीन भएर भागेको हो, न पैसाको कुरा ।
यथार्थ भन्नु पर्दा सिर्जना र मेरो अरेन्ज विवाह भएको थियो, जुन ममीले मिलाइदिनु भएको हो । मेरो सुरुमा नै विवाह गर्ने इच्छा थिएन । विवाह पछि घरमा झगडा हुने त भइहाल्छ । राम्रो होस् भन्ने हुन्थ्यो, त्यो चार वर्षको अवधिमा पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयत्न पनि भएकै हो । तर हामीले त्यो सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सकेनौं । फेरि अरेन्ज विवाह भएको हुँदा परिवारमा सम्बन्ध विच्छेदको प्रस्ताव लग्न पनि अप्ठ्यारो । समाज र परिवारले पनि नमान्ने । सीएम (अध्यक्ष) सँग हिँड्नुपर्ने हुँदा त्यति समय दिन पनि भ्याउँथिनथें । त्यस्तैगरी चल्दै थियो । सगरमाथा आरोहणबाट फर्केपछि त्यो टिमका कृष्ण केसीले व्यक्तिगत मनमुटावको आधारमा गलत समाचार दिनुभयो । त्यति बेलासम्म बिनाजी र मेरो त्यस्तो केही थिएन । पछि त्यो समाचार आइसकेपछि मेरो घरमा पूरै शंकाको दृष्टिकोणले हेरियो । मैले बारम्बार हाम्रो केही छैन, आउने बेलामा कृष्ण केसीसँग मेरो झगडा भएको थियो, त्यही कारणले उनले गलत रिपोर्ट दिए भनें । तैपनि सिर्जनाले विश्वास नगर्ने र ‘म तपाईंसँग बस्न सक्दिनँ’ भन्ने गरिन् । म जान्छु अब आउँदिनँ भनेर गएपछि झन् पागलजस्तो भएँ । घरमा सान्त्वना दिने पनि कोही भएन जस्तो लाग्यो । मिडिया पनि त्यहीअनुसारले अध्यक्षलाई नै बदनाम गर्नतिर उत्रे । बिनाजीको परिवारमा नि त्यस्तै अवस्था । हामीबीच नजिकपन बढ्दै गयो । हामी पार्टीमै खट्ने, पार्टीको नियमअनुसार गलत हो, पार्टीले दिएको सजाय वा कारबाही बेहोर्छौं । यही पार्टीमा खट्ने निर्णयअनुसार हामी यो निर्णयमा पुगेका हौं ।
तर मिडियाले यसरी बंग्याएर पैसाको खेल परिवार, मुख्य त अध्यक्षसँग जोडेर यसलाई तुलना गरेको देख्दा साह्रै दुःख लागेको छ । यसप्रति म पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छु, मैले पार्टी मुख्य त अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर स्पष्टीकरण पनि लेखेको छु । र, अनावश्यक अरूको जीवनमा पार्टी र सीएमप्रति आक्षेप लगाउने काम नगरिदिनु होला । कारबाही अवधिभर हामी पार्टीलाई सहयोग गर्नेछौं । त्यसपछि सक्रिय रूपमा फिल्डमा खटिनेछौं । जे हुनु भइहाल्यो । सम्बन्ध सुमधुर नभएपछि सँगै बस्नुभन्दा छुट्टनिु नै उत्तम हो । शंकाको दृष्टिकोणले मात्र हेरेर त्यो सफल हुँदैन भन्ने निर्णयमा म पुगेँ । भइहाल्यो अब मेरो मागप्रति पार्टीले गम्भीर निर्णय लिने नै छ ।
एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पुत्र प्रकाश विद्यार्थी नेतृ बिना मगरसँग असारको चौथो साता बेपत्ता भएका थिए । निलम्बन भएको दुई सातापछि प्रकाशले अज्ञात स्थलबाट कान्तिपुरका गंगा बीसीलाई इमेल पठाई आफूले बिनासँग हिँडेको स्वीकार गरेका हुन् ।
प्रकाशित मिति: २०६९ श्रावण १२ १२:४७
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Reply	Mahesh says:	July 28, 2012 at 9:35 am	अब इतिहास लाई जिम्मा दिउँ प्रचण्डको प्रयत्न हो कि प्रपञ्च हो भनेर